Dawladaha Sucuudiga iyo Soomaaliya oo gaadhay heshiis ka dhan ah Somaliland | Xaysimo
Home Somalia Dawladaha Sucuudiga iyo Soomaaliya oo gaadhay heshiis ka dhan ah Somaliland
Dawladaha Soomaaliya iyo Sucuudiga ayaa wada hadal yeeshay ka dib markii xayiraada laga qaaday markabkii xoolaha siday ee ka baxay magaalada Berbera.
Sida ay sheegayaan wararku, wadahadalka dhexmaray Soomaaliya iyo Sucuudiga ayey iskula meel-dhigeen go’aano ka dhan ah Somaliland oo ay si wadajir ah u gaadheen.
Arrintan ayaa timid, kadib markii dhawaan la sii daayey Markab ka shiraacday Dekedda Berbera Somaliland oo ku xidhay magaalada Jidda, kaasi oo muddo u xanibnaa ruqsad Caafimaad oo ay leedahay Dawladda Federalka Somalia.
Sida aan ku ogaanay warbixin rasmi ah, Ganacsatada Somaliland iyo wakiillo Somaliland ugu lug lahaa kulankaas ayaa la sheegay in ay aqbaleen, inkasta oo kulankii Golaha Wasiirrada ee Somaliland aanay ku soo hadal qaadin heshiiska Markabkaas lagu siidaayay.
Dalalka Sucuudiga, Yemen iyo Cumaan ayaa ah dalalka ugu badan ee Carbeed ee dhoofsada Xoolaha kala duwan ee laga qaado Xeebaha Somaliland iyo Soomaaliya.